The kacha mma mere ileta Cádiz - Ihe niile ị pụrụ ịhụ! | Njem zuru oke
Cádiz bu obodo na isi obodo di na Andalusia, Spain. Ọ nwere ọtụtụ ebe iji gaa ma nwee obi ụtọ. Otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ ịga ije na-agagharị. Site na ya ị ga-ahụ Katidral ya na n'ezie, Plaza de San Juan de Dios na, n'ihi eziokwu ahụ bụ na osisi nkwụ gbara ya gburugburu, nwere mma anwansi. Nakwa mpaghara a ị nwere ike ịga na Halllọ Nzukọ Obodo na Churchlọ Nzukọ na Casa de los Pazos Miranda.
Ọ bụrụ na anyị agaa ebe akụkọ ihe mere eme ya, mgbe ahụ anyị ga-eleta Barrio del Pópulo. Ebe ọ bụ na ọ bụ otu n’ime ndị kacha ochie ma nwee ọtụtụ arches ndị na-abata. Ma Central Market na Plaza de las Flores bụ ebe ndị ọzọ ị na-ekwesịghị ịhapụ. Flọ ihe nkiri Falla nke na-eme ka mmemme ya, nke nwere njirimara na mpaghara a, enweghị ike ịhapụ njem gị.
Nnukwu ụlọ nke Santa Catalina nwere ike ịchọta na Playa de la Caleta wee bido na narị afọ nke XNUMX. Ọzọ bụ nnukwu ụlọ San Sanbastián, nke dị na nsọtụ njem. N'ezie, anyị anaghị echefu ụfọdụ obodo Cádiz dị ka Jerez de la Frontera, Chiclana ma ọ bụ El Puerto de Santa María, nke ha niile nwere ọtụtụ ebe iji chọpụta.
Ihe ị ga-ahụ na mpaghara Cádiz
O doro anya na ị chetụla ihe ị ga-ahụ na mpaghara Cádiz, ọkachasị mgbe ị na-ahazi njem gaa ...
N'ime obodo Cádiz, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ókèala na mpaghara Malaga, bụ obodo a na-ewere dị ka saịtị nke mmasị ndị njem ...
N’agbata Cádiz, Seville na Malaga, Sierra de Cádiz gosipụtara otu n’ime ebe kacha adọrọ mmasị na Spen na-ekele…
Site na otu n'ime obodo kachasị mma na Andalusia, Jerez de la Frontera na-eguzo na mpaghara ...
Spain bụ mba ọdịiche: site na mbara igwe nke Canary Islands ruo na snow snow-elu nke Picos de Europa, ...
N'ebe ugwu nke ógbè Cádiz, anyị hụrụ ụzọ a na-akpọ White Villages. A
Osimiri kacha mma na Cádiz
Costa de la Luz bụ otu n'ime ebe kachasị mma na mba anyị. Ma eleghị anya ọ bụ n'ihi na ọ bụkwa ...
por Susana godoy eme 4 afọ .
Anyị ga-agagharị ọnụ ọnụ ugwu kacha mma na Spain. N'ihi na ebe a anyị ga-ahụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ...
Osimiri 8 dị n’ụwa ị ga-agarịrị
por Berkwụ Alberto eme 5 afọ .
Site na ohuru nke ụbọchị ndị a, iche n'echiche osimiri dị ka echiche anyị dị ka ihe efu dị ka ọ bụ enweghị ike ịnweta ọbụlagodi ma ọ bụrụ ...